Xogsoor News Network – Page 4 – Just another WordPress site
Kenya “Soomaaliya Dhab kama ahan in divloogu sooceliyo.
DAAWO:- Ex wasiir obsiiye oo u jawaabay boobe yuusuf ducaale iyo Xasan sheekh maxamuud
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta xariga ka jaray Garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo dhismihiisa la soo gabagabeeyay. R/wasaraha iyo wafdigii uu hoggaaminaayey waxaa magaaladaasi ku soo dhoweeyey, wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa, madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen iyo mas’uuliyiin kale. R/wasaare Kheyre ayaa si rasmi ah […]
Maamulka Jubbaland ayaa wali wada abaabul dagaal ay ku doonayaan in ay dib ula wareegaan degmada Balad Xaawo iyo degmooyin kale oo katiran gobolka Gedo ay la wareegeen ciidamo ka amar qaata dowlada federaalka Soomaaliya. Ciidamo badan oo maamulka Jubbaland ka qaaday magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in ay gaareen […]
Maamulka Koonfur Galbeed oonu guuraaya Magaalada.
Madaxweynaha Maamulka KOONFUR Galbeed Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in maamulkiisu u dhawaan u guuri doono magaalada Baraawe oo ah xarunta rasmiga ah ee maamulka Koonfur Galbeed. Cabdi Casiis Xasan Mxamed (Laftagareen) ayaa warbaahinta u sheegay in dhawaan ay maamulkooda ay u guuri doonaan Baraawe, waxaa uu sheegay in wasaaradaha iyo […]
Wararka aan ka heleyno Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas Goordhow uu ka dhacay dagaal u dhexeeyay Ciidamo ka wada tirsan dowladda Federaalka. Dagaalkan ka dhacay Dhuusamareeb ayaa waxaa uu sigaar u dhexmaray Ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugida dowladda ee halkaas ku sugan iyo […]
Hogaamiyaha Xagjirka ah ee Xisbiga Sverigedemokraterna ee Sweden oo laga soo tarxiilay Turkiga
Sida ay qoreen warbaahinta Dalka Sweden waxaa maalinta Jimcada laga soo tarxiilay Dalka Turkiga Hogaamiyaha Xisbiga Sverigedemokraterna kaasi oo kasoo horjeeda Qaxootiga iska dhiiba iyo kuwa ku sugan Dalka Sweden. Sawiro lasoo bandhigay ayaa lagu arkay jimmie åkesson oo dhinacyada kajoogaan Booliska Turkiga kuwaasi oo kasoo tarxiilay Garoonka Istanbul kadib […]
Dhammaan dadka ku nool Talyaaniga ayaa loo sheegay inay guryahooda ku nagaadaan xilli uu si ba’an u faafayo caabuqa Corona ee dadka badan ku laayay dalkaasi. Waqooyiga Talyaaniga ayaa bandowga markii hore lagu soo rogay, hase yeeshee maadaama ay sii badanayaan dadka u dhimanaya xanuunka ayaa ra’iisal wasaare Giuseppe […]
Wargeyska Capital ee ka soo baxa Magaalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya, ayaa sheegay in si buuxda loo joojiyay maalgashigii 19% ee ay Itoobiya ku lahayd horumarinta iyo ballaarinta dekedda Berbera. Wargeyska Capital oo warbixin dheer ka qoray qorshe ay Itoobiya ku doonayso inay deked kaga samaysto dalka Suudaan, […]
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta socdaal dhinaca cirka ah ku tagay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose. Waftiga madaxweynaha oo ka ambabaxay magaaada Kismaayo ayaa waxaa ku wehelinayey safarkiisa xubno ka tirsan labada gollee ee Jubaland iyo sarakiisha ciidamada kala duwan ee Jubbaland. Madaxweynaha oo maalmo […]
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa lagu daabacay in dowladda Kenya ay sheegtay inay ogtahay in Soomaaliya aysan dhab ka ahayn inay dooneyso in loo soo gacan geliyo wasiirka amniga ee dowlad goboleedka Jubaland Cabdirashiid Janan, oo ka soo baxsaday Muqdisho, kuna sugan magaalada Mandhera ee gobolka […]
DAAWO:- Puntland Waa Reer Yar Oo Doonaysa In Ay Dowlad Noqoto.
Gudoomiyaha Xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe oo Warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeisa, ayaa ka hadlay Arimo La xidhiidha Doorashooyinka iyo Dagaaladii dhowaan Qaybo kamid ah gobolka Sanaag ku dhexmaray Ciidamada Putland iyo kuwa Somaliland, Wuxuuna si gaar ah dhaliilo ugu Jeediyey Maamulka Puntland oo uu sheegay inuu yahay Qoys doonaya […]